February 2020 – Page 3 – Awash Times
February 15, 2020 Malka Wabe
February 14, 2020 Malka Wabe
Biyya Gaanaatti FKN chakoolaata wali ergudhaan kabaju. Guyyaa kanas guyyaa Chakoolaata biyyooleessaa jedhani mogaafataniru. Turisimii biyyattis asumaan gudifattu.
Haala siyaasa Oromoo amma irratti yaada
February 12, 2020 Malka Wabe
Haala siyaasaa biyya keenyaa laalchisee haasa’a gabaabaa kana dhaggeeffadhaa
Walitti dhufeenyi mootummaa waliin qabnu hammaate- KFO Jimmaa
February 11, 2020 Malka Wabe
Akkaataa Waaqeffattoonni itti jiraatan Gaazexaan biyya Norway barreesse
February 10, 2020 Malka Wabe
February 8, 2020 Malka Wabe
Guyyaan hadhooli kan kabajamu hadhooli yaadachuufi. Guyyaan hadhoolii kun biyyoota adda addaa keessatti guyyaa adda addaatti kabajama. Biyya Norway keessatti fakkeenyaa ji’a guraandhaala keessatti dilbata